ပုံပြင် တစ်ပုဒ် နဲ့ အလွှမ်း သံလွင် – Hlataw.com
ပုံပြင် တစ်ပုဒ် နဲ့ အလွှမ်း သံလွင်
တ ကယ်တော့ လောကကြီးကအေးချမ်းပါတယ် ပူလောင်ခြင်းဆိုတာတွေ မကောင်းမှုဆိုတာတွေကို လူတွေကသာဖန်တီးဆေးခြယ်လိုရာပုံသွင်းပစ်ခြင်းကို လောကကြီးကသာ ခါးစီးခံနေရတာပါ နေရောင်ခြည်ရဲ့အလင်းကမျက်နှာကို ထိုးကျလာပေမဲ့ မလှုပ်မယှက်ထိုင်ရင်း သံလွင်မြစ်ပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်း မျက်ဝန်းထဲ မျက်ရည်လေးများဝေ့လာရင်း ကမ်းစပ်ကိုအပြေးလေးရိုက်ခတ်လာတဲ့ လှိုင်းခွက်ကလေးများကို မျက်တောင်မခတ်တမ်း ငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဦးငြိမ်းချမ်း တစ်ယောက် ရင်ထဲမငြိမ်းချမ်းပဲ အသက်ကိုပြင်းပြင်းလေးရှုရှိုက်ရင်း သက်ပြင်းတွေသာအခါခါချနေမိပါတော့တယ်ဗျာ
ဦးငြိမ်းချမ်း ကမ်းနားမှာ ဘာထိုင်လုပ်နေတာလည်း နေလဲပူနေပြီ လို့ နောက်ကျောက ထွက်ပေါ်လာသောစကားသံကြောင့် အတွေးများရပ်တန့်လို့ အသံလာရာဘက်ကိုစောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ အော် အလင်းစက် ပဲ လာလေကွာ လာထိုင် လို့ ခေါ်လိုက်တော့ ကျနော် အလင်းစက် တစ်ယောက် ဦးငြိမ်းချမ်းဘေးနားကပ်ပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလည်း ဦးငြိမ်းချမ်း တစ်ယောက်တည်းငေးငိုင်နေတာ ကျနော်ရောက်လာတာတောင် သတိမထားမိလောက်အောင် ပြောပါအုံးဗျာ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အလင်းစက် အတိတ်ကို သတိရပြီး အမှတ်တရဒဏ်ရာတွေကို စဉ်းစားမိလို့ ရင်တွေနာလွန်းလို့ စိတ်ထဲယူကြုံးမရ ဖြစ်လွန်းလို့ သိပ်ကိုသနားစရာကောင်းတဲ့သမီးလေး မွှေးမွှေး ကိုသတိရလွန်းလို့ ဒီနေရာလေးမှာ ဦးငြိမ်းချမ်း လာထိုင်နေမိတာပါ အလင်းစက်ရယ် ပါးပြင်ထက် မျက်ရည်လေးများစီးကျနေသော ဦးငြိမ်းချမ်း ကို ကျနော် အလင်းစက် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ဆွေးရိပ်များသန်းနေတဲ့ ဦးငြိမ်းချမ်း အတိတ်ကို ပြန်လည်လို့တူးဆွမိလိုက်ပါတော့တယ်
ဦးငြိမ်းချမ်း ကျနော် သတိထားကြည့်နေမိတာ ကြာပြီ ဒီနေရာလေးမှာ နေ့လယ်ဘက်ဆိုအမြဲငေးငေးငိုင်ငိုင် လာထိုင်နေတာနဲ့ သနားစရာသမီးလေးမွှေးမွှေး ကို သတိရပြီး လာလာနေတာ ကျနော် အခုမှသိလိုက်ရတော့ နာကျည်းစရာအတိတ်ပုံရိပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလာမိပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော် ကို ရင်ဖွင့်ပြောပြပေးနိုင်မလား ဦးငြိမ်းချမ်း ကျနော် အလင်းစက် စကားအဆုံး၌ မျက်တောင်လေးများပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လှုပ်ရှားမှုက ဦးငြိမ်းချမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ သိပ်ကိုသိသာလွန်းနေပါတယ်ဗျာ သံလွင်မြစ်ပြင်ကြီးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်းလေး ရှုသွင်းလိုက်ပြီး သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက် ချလိုက်ပါတော့တယ် ဟူးး…. ကောင်းပြီ အလင်းစက် စိတ်ထဲမွန်းကျပ်မှုတွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်ရင် ဦးငြိမ်းချမ်း စိတ်တွေ သက်သာရာ ရသွားမလား တွေးမိလို့ ရင်ဖွင့်ပြောပြမယ် အလင်းစက်ဆိုပြီး ဦးငြိမ်းချမ်း တစ်ယောက်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး သံလွင်မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်ပြီး အတိတ်က စာမျက်နှာများကို နှလုံးသားနဲ့ဖွင့်ဟပြီး မျက်ရည်များနဲ့တစ်ရွက်ခြင်းလှန်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
ကရင်ပြည်နယ် ဝင်းကြံကျေးရွာမှာ လယ်သူဌေး ကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့ ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်မကြူ ကြူ မွှေး တို့ မင်္ဂလာပွဲလေး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနေပါတော့တယ် ချစ်လွန်းလို့ ရွှေ ငွေကြေးနဲ့ကြူ ကြူ မွှေး ကို မိဘတွေဆီ နားဖောက်ပြီး ကိုငြိမ်းချမ်း တင်တောင်းလက်ထပ်ခဲ့သော မင်္ဂလာပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတော့တယ် ရွာဓလေ့ အရက်ဝိုင်းလေးနဲ့ အသိမိတ်ဆွေ ဘော်ဒါသူငယ်ချင်းများကို ပြုစုပေးလိုက်ပြီးနောက် ည ၉ နာရီလောက်ကြတော့ ကျနော်ငြိမ်းချမ်း ဘော်ဒါအားလုံးကိုနှုတ်ဆတ်လိုက်ပြီးနောက် ကိုအောင်မောင်း ပြောလေ ငြိမ်ချမ်း ကျနော် ဘော်ဒါတွေသောက်နိုင်သလောက် အရက်အကြိုက် လုပ်ပေးလိုက် ကြိုက်တာမှာပါစေ အကုန်လုပ်ပေးလိုက်နော် ကိုအောင်မောင်း စားသောက်ထားသမျှအကုန်မှတ်ထားလိုက်နော် ကျနော် မနက် ပိုက်ဆံအကုန်လာရှင်းပေးနော် အဲတာပြောချင်လို့ပါ ကိုအောင်မောင်း ရပါတယ် ငြိမ်းချမ်း စိတ်ချ အကုန်လိုလေသေးမရှိအောင် ငါစီစဉ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်
မင်းသာ ဒီည ကြူ ကြူ မွှေး နဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဝှာ သာယာပါစေလို့ ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ငြိမ်းချမ်း ဟားဟားး လုပ်ပြီ ကိုအောင်မောင်းကတော့ ကဲ ကဲ အားလုံးပဲ ငါပြန်ပြီကွာ စိတ်ကြိုက်သာ ချတော့ကွာ ငါလစ်ပြီ ကွာ အိမ်သို့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ချိန် ဘော်ဒါများရဲ့လှောင်ပြောင်စနောက်သံ ဆဲဆိုရယ်မောသံများကို ကျနော် ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပဲ လက်လေးမြှောက်ပြီး လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း ခြေလှမ်းတွေသွက်လို့ ရွာလမ်းမထက် အရက် တွေတွေလေးနဲ့ အိမ်သို့ရင်ခုန်စွာပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရွာလေးရဲ့လမ်းမီးမှုန်ပျပျအောက်မှာ အိပ်မောကျနေတဲ့ဘဝသမားတွေရဲ့ညကမ္ဘာလေးဟာ မြို့ပြလောက်တော့ မခမ်းနားပေမဲ့ အေးချမ်းတဲ့လွန်းလှပါတယ်ဗျာ အရင်က ပြန်နေကျအိမ်ပြန်လမ်းလေးဟာ အခုတော့ မြင်လေသမျှအခုတော့ အရမ်းကိုလှပလွန်းနေလိုက်တာဗျာ ရင်ကတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ အရက်ထက် ကျနော်ငြိမ်းချမ်း ရဲ့ နှလုံးသားကပိုလို့မူးမူးလာပါတော့တယ်ဗျာ တဒုန်းဒုန်း တဒုတ်ဒုတ် ရင်ခုန်သံနဲ့အတူ ရင်ထဲမှာလည်း ဒုန်းစိုင်းလို့နေပါတော့တယ်
အပေါ်ထပ်ကို လှေကားအတိုင်းတတ်လာပြီး အရင်ကအိပ်နေကြအခန်းတံခါးကို ဖွင့်ဖို့ လက်တွေကတုန်လာပြီး စိတ်တွေငြိမ်အောင် အသက်ကိုဝအောင်ရူသွင်းလိုက်ပြီး အားကိုတင်းလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ တံခါးဖွင့်သံလေးကြောင့် အသံလာရာကို အိပ်ယာထက်က မွှေး လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ဘေးသို့တစ်စောင်းလှည့်ပြီး ကျောပေးအိပ်နေပါတော့တယ်ဗျာ အိပ်ခန်းထဲက ညအိပ်မီးလုံးအရောင်ဖျော့ဖျော့အောက် ကျောပေးပြီးတစ်စောင်းအိပ်နေတဲ့ မွှေးကိုယ်လုံးလေးက သေးသွယ်လွန်းတဲ့ခါးအောက်ကလုံးဝိုင်းပြီးမို့မောက်နေတဲ့တင်သားဆိုင်က ငြိမ်းချမ်း ရင်ထဲ နှလုံးသွေးများ ဒိုင်းခနဲ့စောင့်တတ်လာရင်း ပုဆိုးထဲက လီးကလည်း ချက်ချင်း ဖောင်းကြွလာလိုက်တာ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ လီးကခေါင်းတောင်ထွက်လာတော့မလား ဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်ဗျာ အချစ်စိတ်နဲ့သွေးသားကာမစိတ်ကို တွန်းလှန်မနိုင်တော့ပဲ အကျီ င်္နဲ့ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပြီး တစ်ခါတည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီးပါ ချွတ်ချလိုက်တော့ လီးကဖြောင့်တန်းလို့တောင်နေပါတော့တယ်
ရုတ်တရတ် ကျောပေးပြီးတစ်စောင်းလေးအိပ်နေတဲ့ မွှေး တစ်ယောက် ကျနော်ရှိရာ အခန်းဝကို တစ်ချက် ခေါင်းလေးစောင်းငဲ့လို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အားးးးးး အမေ့ လို့ အော်ပြီး လီးတန်းလန်းနဲ့ကျနော်ကို ကြောင်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးလေးပြူးလို့ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့အသက်ရှုဖို့မေ့နေသလား အံ့သြစွာ အော်မိရင်း အသိပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ မျက်လုံးများမှိတ်လိုက်ရင်း အရှက်ကိုမရှိဘူး စိတ်ညစ်လိုက်တာ လို့ပြောပြီး မွှေးတစ်ယောက် ခေါင်းကိုဘေးသို့ပြန်စောင်းချလိုက်ပြီး စောင်ကိုခေါင်းထိဆွဲခြုံလိုက်ပါတော့တယ် ကျနော်လည်း ရှက်မနေတော့ပဲ မွှေးအနားရောက်သွားပြီး အိပ်ယာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ခြုံထားသောစောင်ကို အားနဲ့ဆောင့်ဆွဲလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းတောင့်ကိုပစ်ထုက်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
အားးးးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလည်း အရက်နံကလည်း မွှန်ထူနေတာပဲ အားးးးသေသာသေလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ရှင် မွှေးရယ် မင်္ဂလာဦးည လူပျိုနောက်ဆုံးည သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဂုဏ်ပြု သောက်ပွဲစားပွဲမို့ ကိုငြိမ်းချမ်း ပါးပါးလေး သောက်လာမိတာပါကွာ ပါးပါးလေးမို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ အရက်နံမွှန်ထူနေလိုက်တာ ကျမ ပါ မသောက်ရပဲ ခေါင်းတွေ မူးနေပြီ သိလား သွား သွား အပြင်ထွက်အိပ် ကိုငြိမ်းချမ်း သွား မွှေးကလည်းကွာ ဆိုပြီး ကျနော် မွှေးခါးလေးကိုဆွဲချလိုက်တော့ အိပ်ယာမှာပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားရင်း သနပ်ခါး အဖွေးသားနဲ့ အသားမဖြူ မညိုလေးနဲ့ အရမ်းလှနေသော မွှေးမျက်နှာလေး ကို ကျနော် ခါးကို ငုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးနောက် နှာခေါင်းဝကိုပြေးဝင်လာသော သနပ်ခါးရနံ့သင်းသင်းလေးကအသိစိတ်ကိုလွှင့်ပျောက်သွားစေရင်း ပါးပြင်လေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပြီးနောက် ဆေးမကူထားတဲ့ မွှေး နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို ကျနော် ထပ်မက်စွာ နမ်းစုပ်လိုက်ပါတော့တယ် အွင်းးးးပြွတ် ပြွတ် အွန်းးးးပြွတ် ပြွတ် ပလပ် ပြွတ် ကျနော် ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့တွန်းထုက်နေချိန်မှာတော့ ကျနော် လက်တစ်ဖက်က မွှေး ညာဘက် နို့အုံလေးကို အကျီ င်္လေးပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ပြီး နယ်ညစ်ကိုင်ကစားနေလိုက်ချိန်မှာတော့ မွှေး မျက်လုံးလေး မှိတ်လို့ ကျနော်ရင်ဘတ်ကိုထွန်းကန်နေတဲ့လက်တွေလည်း အိပ်ယာထက် ကျဆင်းလို့သွားပါတော့တယ်ဗျာ
အနမ်းလေး ထဲ လျှာချင်းထိတွေ့တုံ့ပြန်လေးတွေပါ ကျနော် ခံစားမိလာပါတော့တယ် အွန်းးးးအ အု ပြွတ် အင်းးးးးအွင်းးးးးပြွတ် အင်းးးး တုံ့ပြန်အော်ညီးသံလေးများနဲ့ ကျနော် နှုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း အားမလိုအားမရ တပြွတ်ပြွတ် အငမ်းမရ မွှေး တစ်ယောက် တစ်ချက်ချက် ကျနော်လျှာလေးကိုပါ သွားလေးနဲ့ကိုက်ဆွဲပြီး တပြွတ်ပြွတ် တပြက်ပြက်နဲ့စုပ်နမ်းနေပါတော့တယ်ဗျာ နမ်းနေရင်း ကျနော်လည်း မွှေး ထမိန်လေးကို ဖြေချလိုက်ပါတော့တယ် အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားသောကြောင့် မွှေးစောက်ဖုတ်အမွှေးမတိုမရှည်လေးကို ရွရွလေးဖိသပ်ပွတ်လိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်မွှေးများကိုလက်နဲ့ စုပ်ကိုင်ဆွဲလိုက်ချိန်မှာတော့ အားးးးး ကို ငြိမ်း ချမ်း အားးးလားးးးးသေပါပြီရှင်ရယ် အွင်းးးးကျွတ်ကျွတ် ဟူးးးးးးးအားးးးးးအမေ့ လက်ဖဝါးနဲ့ စောက်ဖုတ်မွှေးကို နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပွတ်သပ်လိုက်ပြီးနောက် ကျနော် လက်ခလယ်လက်တစ်ချောင်းကို မွှေးစောက်ဖုတ်ထဲ အသာအယာလေး ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်
အားး…ကို အားး…လားး…အိုးး….အနမ်းလေးများပါ နှုတ်ခမ်းခြင်းလွှတ်သွားပြီးနောက် မွှေး မျက်နှာလေးမော့ ခါးလေးပါကော့လာချိန် စောက်ဖုတ်ထဲ အောင်းနေတဲ့ကျနော်လက်ခလယ်လက်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ပဲ အတွင်းသားစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးကစားလိုက်ရင်း လက်ဖဝါးကလည်း မွှေးစောက်ဖုတ်ကို အပေါ်မှအောက်ခပ်သွက်သွက် ဖိကစားပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျနော် လည်ပင်းကို မွှေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့သိုင်းဖက်ဆွဲချလိုက်ပြီး ဖင်လေးတကြွကြွနဲ့ ကျနော်နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း မွှေး တစ်ယောက် နမ်းစုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ
အွင်း…အွန်းး….အု အ အ အွင်းးးးးးးပြွတ် အား…အင်း.. အွန်းး… မျက်လုံးပြူးပြီး နမ်းစုပ်နေလိုက်တာဗျာ ကျနော် နှုတ်ခမ်းများထူပူလာပြီး နောက်ဆုံး ကျနော် အားထည့်ပြီး မွှေးစောက်ဖုတ်ကိုဖိပွတ်လိုက်ချိန် ကျနော်အောက်နှုတ်ခမ်းကို မွှေးတစ်ယောက်သွားများနဲ့ဖိကိုက်ထားရင်း အင်း…အီးး…ရှီးးး…. အီးး…အားး…အင်းး…အားး ကောင်းတယ် ကို အီးး…အားး…အ အ အားးးးးထွက်ကုန်ပြီ စောက်ဖုတ်ထဲက အားး….ကို အားးးးးစောက်ရမ်းးးးးကောင်း…လိုက်တာာာာကွာ အီးး…အားး… တုန်တုန်တတ်လာပြီး ခေါင်းတွေလည်း တွင်တွင်ခါရင်း ကုန်းကုန်းကြွလာတဲ့ မွှေးကိုယ်လုံးလေးကိုတပ်ရက် ပြောင်းဖိကျလိုက်ရင်း ပြီးမြှောက်ခြင်းအရှိန်မသေသေးခင်း ကျနော် လီးကို စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ရည်ဝနေတဲ့ မွှေး စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိသွင်းပြီး တစ်ချက်ထဲတစ်ဆုံးပစ်သွင်းလိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ် အားးးးး ဆိုတဲ့အော်သံအကျယ်ကြီးနဲ့အတူ ပါးစပ်ကသရေများပါ ထွက်ကျလာပြီး အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာ ကို ရေ လိုး…လိုးး…စမ်းး မွှေးကို ဆောင့် ဆောင့်လိုး စမ်း အားး….အီး…ရှီးး…အူးးးး အားးးလားး… အောင်မလေး ကိုရေ လိုးချက်တွေကပက်စက်လိုက်တာကွာ မညှာနဲ့ မွှေး အရမ်းဖြစ်နေပြီကွာ အိုးးးးးးးစောက်ဖုတ်က ကျိန်းစပ် လောက်အောင် ရွနေအောင် လိုးတတ်လိုက်တာ ကိုရေ အား…အမေ့ ဖတ် ဖတ် ဘွပ် ဖန်းးဖန်းးးး အားးးးးးမွှေး ချစ်လိုက်တာ ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ် အားး….အင့် အင့်ကွာ ချစ်လား မွှေး အားးးးးကောင်းလိုက်တာ အား အင့်ကွာ ချစ်တယ် ကိုရေ အားး… ကောင်းလိုက်တာ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ရွစိရွစိနဲ့ အားးးးလားးးးးအမေရေ အားး.. ဗရမ်းပတာ တွန့်လူးနေလောက်အောင် ချစ်သူကြင်စဦးအပေးအယူမျှတစွာ ချစ်လိုက်ကြတာ
ချွေးသံတရွှဲရွှဲစိုလို့ အခန်းထဲမှာလည်း အော်ဟစ် ကျေနပ်မှုနဲ့ အသံလေးများ ပျံလွင့်မှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်လာရင်း မွှေး စောက်ဖုတ် အတွင်းသားရဲရဲလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ထည့် လိုးရင်း လိုးရင်းနဲ့ ဖင်ကို အောက်ကနေပင့်ပင့်ကြွရင်း ကော့ကော့အလိုးခံနေတဲ့ မွှေးတစ်ယောက်မှာလည်း အား…ကိုရေ ကိုရေ အားးးးလားးးးးးးလိုး ကွဲအောင်လိုးးး လိုးစမ်း လိုးလိုက်စမ်းကွာ အားး…အမေ့ အမေ့ အီးး…အူး…လားးးးရှီ အိုး…ကို အ ကိုရေ လာနေပြီ အားးးးလာနေပြီ အ အ အားး… ကျနော်လည်း မွှေးစောက်ဖုတ်ထဲ လီးကမွှေနှောက်အောင်းနေလိုက်တာ အံများကြိတ်လို့ အိုးး…အင့် အင့် အင့်ကွာ အားး..လားးးးကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးး….အူးးး…အားး…အိုးးးး အားး…လီးကပေါက်ကွဲလုမတတ် တင်းတောင်လာရင်း ပစ်ပစ်သွင်း ဆောင့်ထည့်လိုးလိုက်တိုင်း ဆီးခုံနှစ်ခုရိုက်သံများ တဖန်းဖန်းး တဖြန်းဖြန်းးး ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာရင်း… အားး… ပြီးးးးးပြီးးးးးးးးးပြီ အားးးးးးမွှေးးးးရေ အ အ အ… အားး… ကို အားး…ကိုရေ ထွက်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ အအားးး အ အီးး…ရှီးးးအားး…… ကြင်စဦးချစ်သူနှစ်ဦး ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းကျပ်စွာထပ်ရက် ဖက်ထားရင်း ကျမ မွှေးစောက်ဖုတ်အတွင်းထဲထိ ဖျန်းပက်လာတဲ့ လရေ ပျစ်ချွဲချွဲလေးကို သားအိမ်နံရံထိတွေ့ထိဖမ်းစုပ်ထားလိုက်ရင်း ခါးလေးကော့ကော့ပြီး လရေများပန်းထည့်နေသော ကို ရဲ့ဆီးခုံလေးနဲ့ မွှေးရဲ့ဆီခုံလေးနှစ်ခု ကပ်ကပ်သွားလိုက်တိုင်း တပျစ် ပျစ် အသံလေးများ ကျမနားထဲ ကြားမိလိုက်သလား ခံစားမိရင် ကို့ရဲ့လရေ များကို ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲယူသောက်သုံးမိလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ညကလည်းမိုးလင်းခက်နေသလို့ ကျမတို့နှစ်ယောက်လည်း တိတ်ဆိတ်မှောင်မှိတ်နေတဲ့မှုန်ပျပျ ကြယ်ရောင်အလင်းများအောက် လမ်းပျောက်လို့ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်မကြာမကြာအော်သံလေးများနဲ့ကိုင်ကိုင်ဆုပ်လို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိ ကာမမြစ်ပြင်ကျယ်ထဲ မျှောမျှောနေမိမှန်းမသိတော့ပဲ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလို့ လောကကြီးလည်း အမှောင်အတိကျသွားပါတော့တယ်ဗျာ
တတ်ညီလက်ညီ ဘဝခရီးကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေလာခဲ့တာ အခုတော့ ကျနော်တို့မိသားစုကမ္ဘာလေးမှာ ဆည်းလည်းသံလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သမီးလေး မွှေးမွှေး တောင် ကိုးတန်းကျောင်းသူအရွယ်လေး ရောက်လို့ အပျိုဖော်လေး ဝင်လို့ သူ့အမေ မွှေး ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ သမီးလေး မွှေးမွှေး က အရမ်းကိုလှသွေးကြွယ်လို့ ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင် တစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အထိ သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ မိဘတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလိုလေသေးမရှိအပြည့်အဝ ရရှိပြီး အေးချမ်းသော မိသားစုကမ္ဘာလေးအဖြစ် သိပ်ကိုပျှော်စရာကောင်းလို့နေပါတော့တယ် ။စာရေးသူ / အလင်းစက်
ရေပိုက်ပြင် တဲ့ ကိုကို
စတေး ဟုမ်း အချစ်